Battle Warship: Naval Empire 1.4.2.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.2.8 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
✪ Carrier: ကမ္ဘာတဝှမ်းသယ်ဆောင်၏ 100 ကျော်မျိုး
✪လေယာဉ်: 200 အမြားဆုံးအဆင့်မြင့်ရဟတ်ယာဉ်များ, တိုက်လေယာဉ်များနှင့်ဗုံးကြဲလေယာဉ်
✪စစ်သင်္ဘော: တစ်ဦးချင်းစီဖျက်သင်္ဘောများအတွက်သီးသန့်စွမ်းဆောင်ရည်, Cruiser နှင့်တိုက်
✪ Carrier: စင်းကိုအင်အားအကောင်းဆုံး core ကိုတညျဆောကျ, သယ်ဆောင် Enhance နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်
✪လေယာဉ်: တိုက်ပွဲများကျွမ်းကျင်မှုသော့ဖွင့်ဖို့လေယာဉ် Enhance နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်
✪စစ်သင်္ဘော: ပိုမိုမြင့်မားတိုက်ခိုက်ရေးထိရောက်မှုပိုမိုအဆင့်မြင့်စစ်သင်္ဘော Unlock
မိုဘိုင်းထက်ကျော်လွန် 5.The အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာရေတပ်စစ်
✪Massive PVP & GVG စစ်ပွဲ, ရန်သူ၏အရငျးအမွစျကိုဖကျြဆီးနှင့်ဖမ်းပြီး
✪Challengeကမ္ဘာ့ဖလားသူဌေးက3ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်
စစ်မှန် 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ✪Great Post ကို-Apocalyptic ပင်လယ်ကမ္ဘာကြီး
✪Fast PACE တိုက်ပွဲများသင် 24/7 နိုးစောင့်ရှောက်မည်
ယခုရေတပ်အင်ပါယာ: အကောင်းဆုံး 3D ရေတပ်မဟာဗျူဟာဂိမ်း -Battle စစ်သင်္ဘောထွက်များစစ်ဆေး! သူတို့အားလုံးကိုအဆုံးသတ်မှတစ်ဦးကစစ်ပွဲဂိမ်း!
https://www.facebook.com/warshipsNE: မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကစာမျက်နှာသို့သွားရောက်
အာရုံစူးစိုက်မှု, တိုက်ပွဲစစ်သင်္ဘော: ရေတပ်အင်ပါယာရေတပ်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲဂိမ်းအခြေတည်ပေမယ့်တချို့ပစ္စည်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်လည်းအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံသုံးပြီးဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤအင်္ဂါရပ်များကိုသုံးစွဲဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးဆိုရငျ, သင်၏ Google အတွက်သင့်ရဲ့ settings ကို Store က App ကို Play နှင့်ဝယ်ယူမှုများအတွက် password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို set up ကို configure ပေးပါ။
Battle Warship: Naval Empire အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Battle Warship: Naval Empire အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
mahmoud1rmt စတိုး 674 197.66k
APK ဗားရွင္း 1.4.2.8